Sudio Nio, usati watenga maAirPods tarisa mahedhifoni aya | Ndinobva mac
Sudio Nio, usati watenga maAirPods tarisa mahedhifoni aya
Jordi Gimenez | 14/04/2021 18:00 | Accessories
Patakayedza yekutanga Sudio mahedhifoni, takaona kuti siginecha iyi yanga yakasiyana nemamwe mabhendi enhare. MuSudio vanoshanda nezvinhu zvemhando yepamusoro hauzove nematambudziko mupfungwa iyi, vane zvakagadzirwa zvavo zvinoshamisa uye kana isu tikatarisa pane hwehunhu mhando / mutengo chiyero vane vashoma vanokwikwidza.
Iyi nyowani Sudio Nio ndizvo zvinoda vashandisi vazhinji uye vasingade kushandisa izvo Apple's AirPods inodhura. Iwo haasi akadhura eChina kopi, iwo mahedhifoni akafanana zvakanyanya mukugadzirwa kwese kune maAirPod munzira dzese, zvese zvine mutsindo uye zvine mutsindo asi zvinoenderana nemutengo watiri kutsvaga.
Tenga iyo nyowani Sudio Nio izvozvi
1 Mutengo unoshamisira unenge hafu yeaAirPods
1.1 Ruzha mhando yeNio
1.2 Ergonomics uye bhatani mashandiro
1.3 Main maratidziro eSudio Nio
2 Maonero emupepeti
Mutengo unoshamisira unenge hafu yeaAirPods
Uye hazvigoneke kuti usazvienzanisa neApple AirPods kunyangwe zvese. Dhizaini yaro yakati rebei muchimedu chezeve, chakati kurei mubhokisi rekuchaja (kwete zvimwe zvakawanda) uye kunyanya muhunhu hweruzha hunoita kuti tione maAirPod pamwe neiyo Sudio brand iri mubhokisi.
Kunyanya kutaura uye kutaura pamusoro pemutengo kumagumo ndizvo zvatinofanira kugovana ... aya Sudio Nio akatemerwa pamakumi matanhatu emaeuro, unazvo zvinowanika mumarudzi akasiyana siyana: dema, girini, chena, aurora bhuruu uye jecha ruvara, irwo rudzi rwemuvara wenyama.
Ruzha mhando yeNio
Hatigone kuramba kuti kune mahedhifoni anopa akakwenenzverwa emhando yepamusoro uye zvirinani marongero eruzha pane aya maNio, asi zvine musoro kuti mutengo weaya mahedhifoni hausi padhuze nepadhuze neSudio. Mupfungwa iyi, iyo Sudio Nio inosangana uye havazokuregi Kana iwe uchitsvaga isina mahedhifoni mahedhifoni ane yakanaka mutengo-mhando chiyero.
Iwo mabass akanaka kwazvo, haashatise uye simba reNoio yakawanda uye inopfuura zvakakwana kuterera mimhanzi chero kupi.Ehe, yeuka kuti unofanirwa kudzora chengetedzo mashandiro emahedhifoni pane iyo iPhone kuti uwane iwo ekumusoro mashandiro kana kuti ndoda simba repamusoro.Izvi zvinowanikwa muZvirongwa> Headphone chengetedzo> Deredza ruzha rukuru.
Aya anonyatsonaka mahedhifoni ane huwandu hwakawanda hweodhiyo uye Sudio ine isu yakanyatsoshandiswa mune izvi.
Tora mutengo wakanakisa weSudio Nio mahedhifoni
Ergonomics uye bhatani mashandiro
Ini pachangu, kwandiri chinhu chakakosha kuti mahedhifoni arambe akabatanidzwa mune chero mamiriro uye ndeekuti ini ndinowanzo buda kunomhanya uye kutamba mitambo. Nechikonzero ichocho iyo nyowani Sudio Nio nekutenda kumabhandi erabha ayo aanowedzera muchikamu chinosara panzeve Ivo vanozviita kuti zvirege kuwira pasi, asi kana iwe usiri kuda kushandisa mabhandi erabha iwowo anomira kumusoro chaizvo, iwo akafanana chaizvo neAirPods mune izvi. Ini ndinodonhedza maAirPod angu uye izvi futi, saka kwandiri irabha uye saizi dzayo dzakasiyana dzinowedzerwa mubhokisi mutsauko mukuru neavo Apple.
Iko kushanda kweSudio Nio kuri nyore, kuri nyore. Kana tangoabvisa kubva mubhokisi rekuchaja tinokwanisa kubvisa mapurasitiki kubva pasi uye tozvitsvaga paBluetooth network, tinovasarudza pane chishandiso uye voila ivo vanozowirirana.
Iro vhoriyamu pasi uye vhoriyamu kumusoro mabasa anoitwa pamwe Kubata zvinodzora uye zviri pamusoro peimwe nzeve. Izvi zvinotitadzisa kuita zvisingatarisirwe kana zvisingadiwe kubata kana tichida kuisazve mahedhifoni semuenzaniso, saka kwandiri iwo mukana wakanaka.
Nhare yekuruboshwe ine mashandiro ayo uye nzeve yekurudyi ine yayo. asi dzinogona kushandiswa zvakasiyana kana iwe uchida, uchishandisa zvirokwazvo mashandiro eayo ega akazvimiririra. Izvi zvinogona kuve "kuremara" kudiki nekuti kana tikangoshandisa kurudyi, semuenzaniso, tinogona kumbomisa odhiyo (sekuruboshwe chete), zvinotibvumidza kufambisira mberi rwiyo asi kwete kuidzosera pasi nekusimudza vhoriyamu asi kwete dzikisa. Izvi ndezvekuti sezvo yega yega headset ine yayo mashandiro.
Aya mabasa anotsanangurwa zvakajeka mubhokisi reNio uye zviri nyore chaizvo kubata nemusoro. Kubata kumisa kutamba, maviri kufambisa kana kudzosera nziyo, matatu kukwidza kana kudzikisa vhoriyamu. Zviri yakapusa kwazvo kushandisa kubata kwemahedhifoni.
Main maratidziro eSudio Nio
Iyo Sudio Nio ine IPX4 mvura uye guruva kudzivirira saka hadzisi dzekushandisa mumvura asi dzinomira nemvura zvakanaka. Kune rimwe divi, zvakakosha kuti utaure kuti zvinoenderana ne macOS, iOS, Android uye chero chishandiso chine chinongedzo cheBluetooth.
Mukuwedzera kubva siginecha vanotivimbisa kuzvimiririra kwemaawa makumi maviri asi muchokwadi maawa mashanu ekushandisa mumahedhifoni uye mamwe ese kusvika anosvika makumi maviri anopiwa nebhokisi rekuchaja. Iine bluetooth 5 ichiwana huwandu hunosvika gumi metres kure, USB C yekuchaja chiteshi, inoshandisa SBC codec, ine maikorofoni yakanaka kwazvo yekufona uye haina chayo kushanda.
Yakatumirwa pa: 14 April 2021
Kugadziridza kwekupedzisira: 14 April 2021
Ruzha rwemhando uye simba
Dhizaini yakanaka uye inovandudza nesilicone rabha
Zviri nyore kubatanidza uye kushandisa
Dhizaini uye mutengo
Ivo havana runyararo kudzimiswa (ANC)
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac makomputa » Accessories » Sudio Nio, usati watenga maAirPods tarisa mahedhifoni aya
Nyowani Apple Kudzidza neApple Watch uye COVID-19
Isu tatoziva zuva rekuburitswa kweStephen King akateedzana eApple TV +